Tonelina Ambohidahy Potika ilay taksi nifandona tamin’ny taksibe
Nitrangana lozam-piarakodia mahatsiravina teo amin’ny tonelina Ambohidahy omaly maraina sahabo ho tamin’ny 4ora sy sasany. Fiara lehibe sy kely samy mpitatitra olona no nifandona. Potika tanteraka
ilay fiarakaretsaka raha nifanatrika tamin’ilay taksibe. Araka ny voalazan’ny nanatri-maso dia nisy fahavoazana ihany koa ilay fiara fitateram-bahoaka. Talanjona ireo mpandalo nahita fa hosokirina tao ilay mpamily taksi kinanjo samy tsy nisy naratra ny roa tonta. Nanamafy izany ny mpitandro filaminana misahana ny lozam-pifamoivoizana eo Tsaralalana fa rehefa tsy misy maratra toy izao dia tsy mampandre ny polisy izy ireny. Raha ny filazan’ny nanatri-maso, vokatry ny tsy fitandreman’ny mpamily no nahatonga ny loza. Samy nandeha mafy izy ireo, saingy ilay taksi nikasa hisongona fiara hafa kanefa ity farany ihany koa tsy nanaiky fa vao mainka nitrifana ka izao niafara tamin’ny fahasimban’ny fitaovam-pitaterana izao. Samy niezaka nanitsaka mafy ny tsako kodiarana izy ireo saingy noho ny firimorimo dia niafara tamin’ny fifandonana ihany. Tsikaritry ny mponina Antananarivo fa rehefa alina dia mandeha mafy ireo fiara mpitatitr’olona eto an-drenivohitra. Andrasana ny fampiasana ireo teknolojian’ny fanaraha-maso.